Nlekọta weebụ, n’aka nke ọzọ, bụ ebe ị na-echekwa ọdịnaya blog gị – okwu, blog isiokwu, onyonyo, vidiyo, na ndị ọzọ.
WordPressdị WordPress kačasị ọhụrụ n’oge engede bụ ụdị 5.3.2 – na ndabara ka ị ga-eji WordPress Gutenberg ị ka onye edemede eldere. Gutenberg na-eweta mgbanwe dị ukwuu na nyiwe WordPress. Nke a bara uru maka ndị mbido ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe dị ka ịtọlite ​​ụla n’azụ na ihe ndị ọzọ anaghị achọ ụkọ. Usoro ngọngọ na-enyere aka na njikwa okirikiri edede.
mara Gburugburu, Studio Press, ili samo ono što je WordPress Gburugburu klọb m nwere ike ikwu.